Repoblika Demaokratikan’i Congo : Voampanga Any Avaratr’i Kivu i Rwanda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2012 14:29 GMT
Hatramin'ny volana Aprly, ny M23, ivondronan'ireo mpiady tranainy tao amin'ny mpihoko tutsi Kongoley avy amin'ny Congrès national pour la défense du peuple (ny CNDP dia andian'olona mitam-piadiana mpihoko tamin'izany fotoana) dia manakorontana ny faritany Avaratr'i Kivu any Atsinanan'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo. Voafaritra ao anatin'ny fifanarahana hisian'ny fandriampahalenana niaraka tamin'i Kinshasa, voasonia tamin'ny 2009, ny hetsika M23 dia nandray ireo mpikambana tao amin'ny tafika kongoley (FARDC) hanatevin-daharana azy. Ho tohin'io fifanarahana io ihany, Bosco Ntaganda dia nakarina ho jeneralin'ny tafika ao anatin'ny FARDC ary ny CNDP dia nivadika ho antoko politika. Raha nitazona toerana fandraisana fanapahan-kevitra izy ireny tao amin'ny FARDC hatramin'ny nanaovana sonia ilay fifanarahana, ny ankamaroan'ireny miaramila ireny dia niala an-daharana tao amin'ny tafi-panjakana kongoley tamin'ny volana Martsa. Ankoatry ny zavatra hafa dia takian'ireny miaramila ireny ny hanajàna ny fifanarahana tamin'ny 2009 izay, araka ny hevitr'izy ireo, dia tsy hajain'ny governemanta kongoley. Mihevitra ny sasany fa tsy noho ny tsy fanajàna ireny fifanarahana ireny ihany no anton'ireny fitsoahana an-daharana ireny fa misy ihany koa finiavana hizarazara ny firenena. Mitohy miteraka fahafatesan'olona marobe sy fifindra-monina faoben'ny vahoka ny hetsika M23.
Araka izany ny mpitondra tenin'ny M23, ny lieutenant-colonel Vianney Kazarama milaza hoe :
Misy pejy fanampiny amin'ilay tatitra isan-taonan'ny Kaomitin'ny sazy h an'ny RDC ao amin'ny Firenena Mikambana, navoaka ho fantatry ny rehetra amin'ny fiandohan'nyvolana Jolay, no milaza fa ny tafika mitam-piadiana roandey no :
Toa manana porofo ireo manampahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana, izay milaza fa maro amin'ireo manamboninahitra ambony roandey, ka isan'ireny i James Kabarebe – minisitry ny fiarovana, no mifandray tsy tapaka amin'ny M23 :
Ny 24 Jolay lasa teo, tao amin'ny sisintanin'i Goma, any atsinanan'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo, nandà tsy haka ireo mpihoko 24 avy amin'ny M23 i Rwanda , lazaina fa Roandey, izay tokony ho natolotry ny Firenena Mikambana azy, rehefa tonga tao nitolo-batana ireto mpihoko ireto taorian'ny nialany an-daharana tamin'ilay vondrona mpihoko :